စည်းသုံးစည်း ရှိပါတယ် – Myanmar
February 7, 2021 admin Knowledge 0
ပထမစည်းနဲ့ ဒုတိယစည်း အကွာအဝေး ဒုတိယစည်းနဲ့ တတိယစည်းအကွာအဝေး တတိယစည်းနဲ့ တပ်ဖွဲ့ အကွာအဝေးက ကိုက် ၂၀၀
ပထမစည်း ဒုတိယ စည်းကို ဖြတ်ပီးတဲ့အထိ တော့ အန္တရာယ်က မရှိသေးပါဘူး အကောင်းဆုံးကတော့ ဘယ်စည်းကိုမှမဖြတ်တာအကောင်းဆုံးပါ၊
“ဤစည်းကို မကျော်ရ၊ ကျော်လျင်ပစ်မည်” ဆိုပီး စာရေးထားတာ ရှိပါမယ် ပီးရင် ရဲအရာရှိ၊တပ်အရာရှိက. ပြည်သူလူထုကို
စည်းကိုမကျော်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတာ ၊ တောင်းပန်တာလုပ်နေရင် အတက်နိုင်ဆုံး ကိုယ်တိုင်မကျော်ဖို့နဲ့ အခြားလူတွေကိုလဲ မကျော်ဖို့ စည်းအပြင်ဘက်ကပဲ ဆန္ဒပြဖို့ တိုက်တွန်းပေးပါ
တတိယစည်းကို မိုက်ရူးရဲဆန်ပီးး ကျော်လိုက်ရင် ဥပဒေအရပစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသွားပါပီ ပစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ ကျိုးရုံ ကန်းရုံပစ်ခတ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ အသေပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်လို့ နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာ ပါပီးသားဖြစ်နေပါတယ် ခြောက်လှန့်ပီး ပစ်လိုက်ရင် ဆန္ဒပြသူတွေက.” ဒီကောင်တွေ တကယ်မပစ်ရဲပါဘူး မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တာပါ ခြေထောက်ပစ်ချိုးခွင့်ပဲရှိတာပါလို့” အထင်အမြင်တွေမှား ပီး ရှေ့ဆက်တိုးလာမှာဆိုးလို့
ဆန္ဒပြနေတဲ့လူအုပ်ထဲက မှ လူထုကိုဆူပူ အုံကြွအောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့ လူကို Volunteer ထုတ်ပီးအသေပစ်ခတ်ခြင်းမျိုးလုပ်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပီးတော့ လူအုပ်က. ရှေ့ဆက်တိုးလာရင် ထပ်ပီး ပစ်ခတ်ရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် လူအုပ် ဖရိုဖရဲတကွဲတပြားနဲ့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ အချိန်မှပဲ အပစ်ရပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ဥပဒေတွေက မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာပဲ သီးသန့်တိတ်တိတ်လေးချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေမဟုတ် ပါဘူး
မြို့တွင်းထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်နေတဲ့လူစုလူဝေးကိုဖြိုခွဲဖို့ အိန္ဒိယ၊အင်္ဂလန် အပါအဝင် တခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲ လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဆန္ဒပြတဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သား၊ နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ ဘဝတွေ၊အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူ လို့မြင်ပေမယ့်လဲတရားဥပေဒအရေတာ့ “ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူစုလူဝေး(Unlawful Assembly)” လို့သာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်
ပြည်သူတွေရော တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရော ရဲ့ နောက်ကွယ် မိသားစုတွေ ရှိကြပါတယ် မည်သူတဉ်ီးတယောက်မှ မျက်ရည်ကျရတာ ဝမ်းနည်းရတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် ဆဲဆိုတာ ၊စောင်းမြောင်းပုတ်ခတ်တာ၊တခြား ရိုင်းစိုင်းတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေလုပ်တာ ရှောင်ရှားပီးး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တာမျိုးပဲ လုပ်ပေးကြပါ
အားလုံး အားလုံးးး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေ🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Credit ပေးစရာမလိုပါ … အများသိအောင် share ပေးပါ… အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေ
Be safe everyone😞
တတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ခေါ်ယူကျင်းပ